यस कारण खुलेन मनकामना स्मार्टको सेयर कारोबार Bizshala -
काठमाण्डौ । हालै आईपीओ बिक्री गरी बाँडफाँड गरेको मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको सेयर आज सोमबारबाट धितोपत्र दोस्रो बजारमा कारोबार खुल्न सकेन।
स्पेसल प्रि–ओपन सेसनमा आज नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) तोकेको ओपनिङ रेन्जभित्रै सेयर किनबेच नभएपछि मनकामना स्मार्टको सेयर नियमित समयका लागि कारोबार खुल्न नसकेको हो। अब भोलि स्पेसल प्रि–सेसनमा नेप्सेले तोकेको रेन्जभित्र सेयर किनबेच भएमा नियमित समयका लागि कारोबार खुल्नेछ।
हिजो आइतबार मनकामना स्टमार्टको नेप्सेमा सेयर सूचीकरण सम्झौता भएको थियो। कुनै पनि कम्पनीको सेयर नेप्सेमा सूचीकरण भएको दोस्रो दिनबाट कारोबार आउने गर्छ। तर स्पेसल प्रि–ओपन सेसनमा नेप्सेले तोकेको रेन्जमा सेयर किनबेच नभएपछि नियमित कारोबार नखुलेको हो।
यो लघुवित्तलाई नेप्सेले एमकेएलबी कारोबार संकेत प्रदान गरेको छ भने पहिलो करोबारका लागि न्यूनतम ११०.८४ रुपैयाँदेखि अधिकतम ३३२.५२ रुपैयाँ ओपनिङ रेन्ज तोकेको थियो।
नेप्सेमा मनकामना स्मार्टको १०० रुपैयाँ अंकित दरका कुल १२ लाख ११ हजार ५०० कित्ता सूचीकृत भएको छ। जसमा संस्थापकको ८ लाख २२ हजार ५०० कित्ता र सर्वसाधारणको ३ लाख ८९ हजार कित्ता रहेका छन्।
यो लघुवित्तले गत असार १७ गतेदेखि असार २१ गतेसम्म आईपीओ निष्कासन गरेको छ। आईपीओ बाँडफाँड असार २८ गते गरिएको थियो।
प्राविधिक रुपमा यस्तो देखियो सेयर बजारमा आरबीसीएलको आगामी
– अर्जुन तिमिल्सिना काठमाण्डौ । नेपालका १८ वटा निर्जीवन बीमा...
बिजशालाको विषयमा भ्रम फैलाउनेविरुद्ध प्रहरीको साइबर
काठमाण्डौ । नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोमा बिजशालाले उजुरी दर्ता...
आँखुखोलाको लकइन अवधि सकिँदै, स्थानीय र संस्थापकको सेयर
काठमाण्डौ । आँखुखोला जलविद्युत कम्पनीले आयोजना प्रभावित...
प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सको सेयर लिलामीमा, न्यूनतम मूल्य
काठमाण्डौ । प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सको ७० हजार कित्ता बढी...
सानिमा इक्विटी फन्डको मूल्य समायोजन, प्रतिइकाइ कति ?
काठमाण्डौ । गत आर्थिक वर्षको प्रतिफलका लागि सानिमा म्युचु्अल...
नबिल इक्विटी फन्ड र ब्यालेन्स्ड फन्ड–२ को प्रतिफल पाउन
मूल्य समायोजनपछि एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको सेयरभाउ कति ?
काठमाण्डौ । बोनस र हकप्रद सेयरका लागि एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको...
काठमाण्डौ । सामलिङ्ग पावर कम्पनी लिमिटेडले आयोजना प्रभावित...